Ukuveliswa kweNdebe yePhepha laseChina kunye neFektri | JAHOO
Iikomityi zephepha, zigqibelele ikofu, itshokholethi eshushu okanye nayiphi na into eselwayo eshushu okanye ebandayo, ilungele ukusetyenziswa ekhaya okanye kwintengiso. Ifanelekile iti yobisi, Ivenkile yobisi yeembotyi zesoya, iivenkile ezibandayo, iivenkile zokutya okukhawulezayo, ivenkile yekofu iDessert House Ihotele, irestyu, ikhaya kunye nolonwabo, Ubushushu obuphezulu o ...
Iikomityi zephepha, zigqibelele ikofu, itshokholethi eshushu okanye nayiphi na into eselwayo eshushu okanye ebandayo, ilungele ukusetyenziswa ekhaya okanye kwintengiso. Ifanelekile iti yobisi, Ivenkile yobisi yeembotyi zesoya, iivenkile ezibandayo, iivenkile ezithengisa ukutya okukhawulezayo, ivenkile yekofu iDessert House Hotel, irestyu, ikhaya kunye neendlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa, iqondo lobushushu eliphezulu le-100 DEG C, akukho kuvuza, akukho vumba, akukho lula deformation .
Kwimpilo yakho kunye nokusingqongileyo okuluhlaza, kuyacetyiswa kwaye kuyacetyiswa ukuba usebenzise iikomityi zamaphepha ezilahlwayo ezikumgangatho ophezulu kunye neetafile zamaphepha eziveliswe nguHunan Youliq ohlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo!
Siyakholelwa ukuba ezona mveliso zintle zisekwe kwinto yokuba azizukubaneziphumo zexesha elide kuMama Wendalo. Sizimisele ukuvelisa kuphela iimveliso ezinokuthotywa ngokupheleleyo ezinobuhlobo kokusingqongileyo kwaye ezingangcolisiyo kwizinto ezisetyenzisiweyo ukuya kwinkqubo yemveliso emva kokusetyenziswa. Sikunye nawe onokubona kwangaphambili, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze sikhulele kwindalo esingqongileyo yoluntu kunye nohlaza lomhlaba.
Egqithileyo Indebe yePhepha
Okulandelayo: Indebe yePhepha
Ikomityi yeti yobisi
indebe yobisi lwecoco
Umaleko iphepha enye indebe ebandayo
Umakazi uLushang iNdebe yePhepha enye yoLuhlu